मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो निर्देशन, प्रचण्ड चकित — Sanchar Kendra
मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो निर्देशन, प्रचण्ड चकित
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिने प्रकारको आर्थिक उन्नति र विकासको प्रगति ल्याउने गरी योजनाबद्ध र समन्वयतात्मकरुपमा सक्रिय हुन मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पहिलो दुई महिनाको समीक्षा गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले घोषित लक्ष्य र प्रगतिलाई आगामी समीक्षामा नयाँ सोचका साथ बढी स्पस्ट र मूर्त बनाएर प्रस्तुत गर्न पनि निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘अगाडि नबढेका आयोजनाहरु के कारण अगाडि नबढेको हो भन्ने देखिनुपर्छ । यस दुई महिनामा नभएका काम छन् भने आगामी दुई महिनामा दोब्बररुपमा काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसकेकामा वार्षिक लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्थिति हुन्छ । यसमा साथीहरुको ध्यान जाओस् । काम बढी गर्न र प्रतिवेदन चुस्त, दुरुस्त राख्नुहोस् ।’
उनले महत्वपूर्ण र ठूला काम हुन नसकेमा साना–साना काम सम्पन्न हुनुको अर्थ नरहने भन्दै विकासमा योगदान दिन, आर्थिक उन्नति र समाजमा परिवर्तनको सकारात्मक परिणाम र असर पार्नसक्ने गरी महत्वपूर्ण कार्यक्रममा केन्द्रित हुन पनि आग्रह गरे । फाइल बढी अल्झिने मानिएका मन्त्रालयलाई ढिलाइ नगर्न र अर्काे मन्त्रालयको प्रगतिमा सघाउन उनले आग्रह गरे ।
उनले सही समयमा सही काम गर्न र मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता हुनेखालका प्रस्ताव नल्याउनसमेत ध्यानाकर्षण गरे । ‘हामी चल्ते, चलाते ढंगले होइन, नवीनता र सहजताका साथ अगाडि जान चाहन्छौं । जटिलता होइन, सहजता खोज्नुपर्छ’–प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले विकास किन भएन ? किन ढिलो हुन्छ ? कारणहरु खोज्नुपर्छ भन्दै खरिद ऐन वा अरु कारणहरु के छन् ? एउटै ठेकेदारले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का किन लिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
राजनीतिक प्रभावमा केही ठेकेदारलाई काखी च्यापेर, उनीहरुले जे गरे पनि आँखा चिम्लिएर जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्ने र देशलाई ध्यानमा राखेर स्वच्छता, पारदर्शीता र समुचित ढंगले विकासलाई अगाडि बढाएर जनतामा सन्तुष्टि दिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेट, कार्यक्रम र सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार प्राप्त प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।